Faahfahin Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Weerarka Kismaayo. – Calamada.com
Faahfahin Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Weerarka Kismaayo.
calamada July 12, 2019 1 min read
Waxaa sii xoogeystay Weerarka Culus ee Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay ku qaadeen Hoteelka Cas-caseey ee Magaalada Kismaayo.
Weerarka Culus ee ka socda Hoteelka ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo soo gaartay Dowladda Ridada Federaalka iyo Maamul Gobaleedka Gaala raaca isku magacaabay Jubbo Land.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa buuxda u maamulaya oo gacanta ku haya Hoteelka waxeyna Toogasho ka wadaan gudaha Hoteelka, Iyadoona Ciidamada Saliibiyiinta Kenya iyo Maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka dagaalamayaan Banaanka hore ee Hoteelka.
Xubnaha lagu dilay Hoteelka waxaa ka mid ah Fariid Jaamac Suleymaan oo ah Waziirkii hore Ganacsiga Maamulka Jubbo Land, Sidoo kale Xubno kale oo Fara Badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday Weerarka.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa Wali Toogasho ka wada Gudaha Hoteelka waxeyna tani muujineysaa in gudaha Hoteelka ay daadsanyihiin Meydadka Xubno kala duwan oo Murtadiinta ka tirsan kuwaasi oo qeyb ka ah Xubnaha ku go’doonsan gudaha Hoteelka.
Previous: Howgalka Kismaayo Oo Galay Saacadii Shanaad+Faahfaahin Cusub.
Next: Howlgalka Magaalada Kismaayo Oo Galay Maalintii Labaad.